Waxaa caawa fiidkii Gegida diyaaradaha ee Jomo Kenyta ka soo degey Natfii Hure Cabdikariin Sh Muuse (Qalbi Dhagax), halkaas oo boqaal shacab ah ku sugyeen soo dhaweyntiisa.
Sida wariyaheena Nairobi noo xaqiijiyey, waxaa adkaatey sida loo xakameeyo dadka faraha badan ee Cabdikariin soo dhaweynaysay waxaana dhacdey in dhowr jeer la hakiyo soo bixitaankiisa. Sid aad ka arki doono Videow-gan, Cabdikariin ayaa isku dayey in shacabka la hadlo, laakiin sawaxan iyo buuq badan kadib, ciidanka nabadgelyada ayaa si xoog ah Cabdikariin goobta kaga kaxeeyey
Cabdikariin oo ka mid ahaa Saraakiisha sar sare ee Ururka ONLF ayaa August 28, 2017 Ciidmaada Nabad sugida ee Soomaaliya ka soo afduubeen Magaalada Gaalkacayo kadibna xukumada Soomaaliya ku wareejisay dawlada Itooboya, iyada oo Cabdikariin iyo Ururka ONLF ku shaabadeysay in ay yhiin Argagiso. Shacabka Soomaliyeed ee dal iyo dibad ayaa arintaas aad uga xumaadey, iyaga oo ku tilmaamey in qaranimadii Soomaaliya meel looga dhacey.
N/Hure Cabdikariin ayaa waxaa cafis u fidiyey Raysal Wasaaraha cusub ee Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali oo isbedel balaadhan ka qada wadanka Itoobiya. Taas oo keentey in mabaxaabiis badan oo siyaasadeed ooda laga qaado, isla markaana ay xukumda Itoobiya liiska argagisanimada ka saarto ururada ay ka mid yhiin ONLF, OLF iyo Gimbot 7.
Cabdikariin ayaa ka mid ahaan jirey Saraakiishii Xooga dalka Soomaaliyeed, wuxuna isaga oo 17 jir ah ku biirey Ciidanka Xooga Dalka Soomaliya. Wxuu ka soo qab qaatey dagaalkii 77 ee Soomaliya iyo Itooboya. Sida warku sheegayo Cabdikariin 2 jeer ayuu dagaalada looga soo horjeedo Itooboua ku dhaawacmey, waxa uuna ku heay 2 bilad geesi. Sida dadka qaraabadiisu noo xaqiijieen waxaa dagaalkii 77 ku shahiiday Cabdikariin walalkiis oo isaga ka weynaa.
Waxaa la filayaa in maalmaha soo socda uu Cabdikariin qaban doono warsaxaafadeed uu ku sheegi doono qaabkii loo qabtey iyo cidda ma’suulka ka ah qabashadiisa.
PreviousThe 3rd ONLF National Congress Continues in Eritrea.
NextAdmiral Moxamed Cumar Cismaan oo mar kale loo doortey ONLF
Itoobiya oo kacdoon xoog leh ka socdo